जीवनशैली Archives | Page4of4| Daily State News
पछिल्लो समय युवा पुस्तामा रुचाइन थालेका नाममध्ये गायिका योजना पुरी सूचीमा पर्छिन् । हालै उनले ल्याएको ‘यसपालिको तीजमा’ बोलको गीत धेरैले मन पराएका छन् । ‘भुँडीवाला केटो’, ‘घर होइन मन’, ‘बस्नै नसक्ने’, ‘ए शिवजी’, उनका चर्चित गीत हुन् । आधुनिक, लोक र तीजगीतमा आवाज दिँदै आएकी गायिका पुरी मिडियाकर्मी पनि हुन् । मास कम्युनिकेसनबाट स्नातकोत्तर […]
बीबीसी के तपाईं पनि डेस्कटप वा ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै रिफ्रेश गर्न सुरु गर्नुहुन्छ ? यस्तो बानी धेरैको हुन्छ जो माउसलाई राइट क्लिक र रिफ्रेश गर्न सुरु गर्छन् । थुप्रै मानिसहरु लगातार यसो गर्छन् । तर के तपाईंले कहिले सोच्नुभएको छ, रिफ्रेश गर्दा केही असर हुन्छ कि हुँदैन । १० मध्ये ९ विन्डो प्रयोगकर्ता अत्यधिक रिफ्रेश […]
भद्दा शरीरलाई स्लिम बनाएर उनी कसरी फिटनेस ट्रेनर बनिन् ?
सपनाले विगतको भन्दा ३० केजी तौल घटाएकी हुन् आकर्षक र कामुक जिउडालकी एक युवती अहिले एकाएक चर्चामा छिन् । खासगरी सामाजिक संजालमा उनको व्यापक फलोअर्स छन् । इन्स्टाग्राममा मात्र उनलाई १२ लाखले पच्छ्याएका छन् । जब उनी आफ्नो फोटो शेयर गर्छिन्, हंगमा मचिन्छ । उनको नाम हो, सपना व्यास पटेल । सपनलाई चिनाउने दुई विशेषण […]
साथीले गरेको देखेपछि विवाह गरौँगरौँ लाग्दैन ?
हालै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका नायिका एवं अन्य साथीहरूको वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवनमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । विवाह जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, विवाह देखेको होइन लेखेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विवाह र मरण भन्ने कुरा कसैको हातमा हुँदैन । त्यसैले मैले पनि अहिलेसम्म विवाह कहिले गर्छु भनेर सोचेकै छैन । सोचमै नआएपछि […]